Home Wararka Maanta Madaxweyne Cabdi Iley oo diiday in maxkamad la hor-geeyo- Muxuu dalbaday?
Madaxweyne Cabdi Iley oo diiday in maxkamad la hor-geeyo- Muxuu dalbaday?
Madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Iley) ayaa diiday in mar dambe uu hortago maxkamadda gacanta ku haysa kiiska dacwadaha loo heysto.
Cabdi Iley waxaa la xiran xubno kale oo Soomaali ah, kuwaas oo ka hoos shaqeyn jiray mudadii uu joogay xukunka, Talaadadii lasoo dhaafay ayaa looga jeeray xafiiska maxkamadda kiiskooda gacanta ku heysa, balse dhamaantood waxay diideen inay maxkamadda hor-tagaan.
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo saraakiisha kale ee Soomaalida ah, waxay ku doodeen in bilihii lasoo dhaafay xabsiyada Itoobiya laga siidaayey dadkii ka soo jeeday qowmiyadaha kale, kuwaas oo qaar ay isku kiis ahaayeen, qaarna ay kasii dembiyo cuslaayeen.
Maxabiista Soomaalida ah ee Madaxweyne Cabdi Iley waxay sheegeen in aysan jirin sabab Soomaalida kaliya xabsiyada loogu sii hayo, iyagoo ku dooday in 17 maxbuus oo qowmiyadaha kale ee dalka Itoobiya ka soo kala jeeda xabsiyada laga sii daayey.
Xubnaha dambiyada waaweyn loo haystay ee ay dowladda dhexe ee Itoobiya sii deysay uu Cabdi soo xigtay waxaa ka mid ah Sibhat Neggaa oo ah aas-aasaha iyo maskaxda fallaagada Tigrayga ee TPLF iyo xubno kale oo ka soo kala jeeda qowmiyadaha Amxaarada iyo Tigreega.
Waxaa la sheegay in Cabdi Iley uu codsi gaar ah u diray Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, isagoo ka dalbaday inuu cafis u fidiyo, balse Abiy oo ka hadlay xarigga Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu sheegay inuu mari doono dariiqa saxda ah ee garsoorka, isla markaana helina doono maxkamadayn caddaalad ah.
Muddada uu Cabdi Maxamuud Cumar uu ku jiray gacanta dowladda dhexe waxaa marar badan lasoo taagay maxkamadda sare ee dalka, inkastoo ilaa hadda aan wax xukun ah lagu ridin.
Bishii Agoosto ee sanadkii 2019-kii ayaa Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar xabsiga la dhigay, kadib mudo 8-sano ah oo deegaanka Soomaali Galbeed uu gacan bir ah ku xukumaayey.
Baarlamaanka deegaanka Soomaalida ayaa Cabdi Iley xasaanadii ka xayuubiyey 26-kii bishii Agoosto ee sanadkii 2018-kii, waxii intaas ka dambeeyana waxuu ahaa eedeysane xabsiga ugu jira dowladda dhexe ee Itoobiya.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Itoobiya oo xarigga Cabdi Iley ka hadlay wuxuu sheegay in loo haysto gabood fallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo ku tagrifal awoodeed.
Cabdiweli Jaamac oo ah xeer ilaaliyaha dawlad deegaanka Soomaali Galbeed, oo BBC la hadlay aya sharaxay eedeymaha loo hesto Cabdi Iley, isagoo yiri, “Dhibaatooyinka dadka lagu samayn jiray waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, reero badan oo iyaga guryahooda iska jooga inta ciidan la soo geliyo la layn jirey, iyaga oo aan waxba galabsan, kufsi la gaysan jiray. Waxaa kaloo jirtay dadka inta la xirxiro jeelasha lagu layn jiray, sida Jeel Ogaadeen oo kale. Dhibaatooyin balaaran ayaa ka dhacday deegaanka waa la wada ogyahay. Dhibaatada dadka lagu samayn jiray aad bay u ballaarnayd.”
Villa Somalia oo shaacisay inay qoraallo ‘u guddoontay’ madaxweyne Xasan Sheekh
Maxay dib usoo laabashada Mareykanka ka bedeli kartaa DAGAALKA Al-Shabaab?